Beeralleyda gobolka Gedo oo ka caga jiidaya inay qotaan beeraha.
Gedo 11 Nov, 2011Inkasta oo ay bulshada gobolka Gedo ka soo samatabaxeen abaartii iyo kuleylkii jiilaalka, haddana wali badankood uma dhaqaaqin qodashada beeraha oo waxay ka dhursugayaan inuu dhulku liqo biyaha dhex ceegaaga, waqtiyada uu roobku da'ayana uu kala fogaado, si uu dhulku u yara kafafo deetana ay suuragasho in wax lagu tabcan karo.
Beeralley fara badan oo la hadlay raadiyo ERGO ayaa sheegay iney Alle uga mahadinayaan raxmadda ku hoortay gayigooda, walina ku dul da'eysa, waxayse tilmaameen iney wali u suura geli la'adahay iney tabcadaan beeraha maadaama roobabku aaney kala go’ lahayn. dhulka meelaha qodashada ku wacan ee ay beeruhu ku yaallaanna ay ku jiraan biyo fara badan, qaarkoodana ay yihiin wali kuwa qoyan oo aad u jilicsan xilligii ku habboonaa tacabkana uu wali dhiman yahay.
Mid ka mid ah beeralleydii u warrantahay raadiyaha ERGO, ayaa isagoo ku sagan magaalada Luuq wuxuu sheegay iney isu diyaarinayaan iney dhulka miro ku beertaan, laakiin haddana ay aad u taxaddarayaan oo ay ka fekerayaan waxyeello kasta oo soo wajihi karta beerahooda.
"Beeraha hadda xilli roob waaye, biyaa fadhiya lama galo marka xilliyada roobka uu feero ama uu kala kaco fursad lagu gaadaa oo beeraha in la tabcan karo ayaa leysku dayaa marmar waxaad arkeysaa dheelidii oo dhexmareysa roobka uu ku da'ayo, dheelidu biyaha raaceyso" ayuu sheegay mid ka tirsan dhul qodatada degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Sidaasoo kale waxaa isna beeralley kale oo ku sugan magaalada Doolow ee gobolka Gedo uu ERGO u sheegay, in haba yaraatee aanu hadda wax tacbasho la taaban karo ka jirin Gobolka, laakiin ay sugayaan oo kaliya cirka iyo dhulka oo isla hela fursad yar oo u oggolaan karta iney dhul qodashada ku dhaqaaqaan.
"Tacbasho hadda majirto oo waa roobsan yihiin beeraha, kolkey biyaha ka dhammaadaan ayay abuurayaan, roobabna waa laga baqayaa haddana biyaa ku jira” ayuu yiri beeraley ku sugan magaalada Doolow ee waqooyiga gobolka Gedo.
Magaalooyin kale oo ku yaalla gobolka ayay xaaladahaan oo kale ka taagan yihiin, sida degmada Baardheere oo uu maro wabiga Jubba, waxaana si kasta oo ay tahayba beeraleydu heegan ugu jiraan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen roobabka da'ay iyo reyska dhulka barwaaqada maanta la jiifa.